सम्मान स्वरुप सेयर गरौ ! घास काटेरै नर्स बनिन सरिता चेपाङ – Articles Nepal
सम्मान स्वरुप सेयर गरौ ! घास काटेरै नर्स बनिन सरिता चेपाङ
Articles Nepal September 25, 2019 0
गत वर्ष नर्सिङ अध्ययन उत्तीर्ण गरेकी उनले नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा दिएर लाइसेन्ससमेत लिइ सकेकी छन्। उनका एक दिदी, दुई बहिनी र एक भाइ छ न्। पाँच सन्तानमध्ये उनी पढाइमा मेहनती थिइन्। अभिभावकले पनि पढ्न प्रोत्साहन गरे। घरबाट २० मिनेट लाग्ने चित्रकला प्राथमिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्म पढिन्।
Previous Post: ४४ वर्षपछि भैसी लड्यो, दार्जीलिङका डेजी र चन्दनको वाहवाही- भिडियो
Next Post: कक्षा ११ को परीक्षामा नेपाल टपर बने अरबिन अमगाई